Friday, 23 September 2011 22:27	नागरिक
काठमाडौँ, असोज ६ (नागरिक) - प्रख्यात गजल गायक जगजित सिंहलाई ब्रेन ह्यामरेज भएपछि मुम्बईको लिलावती अस्पतालमा भर्ती गरिएको छ। उनको अवस्था सिकिस्त रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। चिकित्सकहरुले ७० वर्षीय गायक सिंहको लामो समयदेखि मुटुमा रहेको समस्याका कारण ब्रेन ह्यामरेज भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्।
Friday, 23 September 2011 11:26	नागरिक
दीपेन्द्र लामा- गायक भक्तराज आचार्यको जीवनीमा आधारित 'आचार्य' एउटा उपलब्धिमूलक फिल्म बनेको छ, जसमा कथामात्र होइन दृश्य रूपान्तरण पनि आकर्षक छ। फिल्म दृश्य माध्यम हो। यसमा दृश्य (इमेज)हरूमार्फत् कथा सम्प्रेषण गरिन्छ। कुनै चिरपरिचित कथा छानेकै भरमा फिल्म राम्रो बन्दैन। कथा भन्न प्रयोग गरिने दृश्य वा चित्रहरूको भाषा पनि असरदायी हुनुपर्छ। निर्देशक प्रशान्त रसाइलीले यो मन्त्रलाई आत्मसात गरेका छन्।
Thursday, 22 September 2011 11:00	नागरिक
काठमाडौं, असोज ५ (नागरिक) - 'तरकारीको स्वाद हेरेर बताउन सकिँदैन, चाख्नुपर्छ। विज्ञापन हेर्दा राम्रै लागेको छ,' प्रिमियर शोअघि आफ्नै जीवनमा आधारित फिल्म 'आचार्य'बारे यस्तो टिप्पणी थियो गायक भक्तराज आचार्यको। २ घन्टा २० मिनेटको फिल्मले आचार्यका प्रशंसकलाई निकै भावुक तुल्यायो। प्रतिक्रिया दिने धेरैको गला अवरुद्ध भए पनि उनी सामान्य मुद्रामा हलबाट बाहिरिए। 'फिल्म ठिकै बनेको रहेछ। केही कुरा थपेको पनि रहेछ,' आफ्नो जीवनकथा पर्दामा हेरेपछि उनले नागरिकलाई प्रतिक्रिया दिए, 'मेरो सबै कथा त फिल्ममा कसरी अटोस्? त्यसो गर्न त १० घन्टाको फिल्म बनाउनुपर्छ।'
Thursday, 22 September 2011 10:59	नागरिक
मनोज घर्तीमगर, पोखरा, असोज ५- करिब दुई हजार गीत गाइसकेकी लोकदोहोरी गायिका शर्मिला गुरुङले पोखरामा आफ्ना दुई गीतको भिडियो सुटिङ गरेकी छिन्। उनले 'भमरा घुम्छ सालैजो' र 'मन्दिरैमा सुनको गजुर' बोलको गीतको सुटिङ सोमबार सकेकी हुन्।
Tuesday, 20 September 2011 10:15	नागरिक
काठमाडौं, असोज ३ (नागरिक) - गत आइतबार साँझ गएको भूइचालोले नेपाल, भारत र चीनमा गरी ६८ को ज्यान गयो। यो भुकम्पले राजधानी राम्रैसँग हल्लिन पुग्यो। सर्वसाधारणसँगै सेलिब्रेटीहरु पनि भुकम्पको कम्पनबाट अत्तालिन पुगे। ९० सालयताकै ठूलो भुकम्पको कम्पन बेहोरेका कलाकारहरु के गर्दै थिए त ? हामीले केही प्रतिनिधि कलाकारसँग सोध्यौ। उनीहरुको जवाफ यस्तो थियो :
Sunday, 18 September 2011 17:13	नागरिक
काठमाडौं, असोज १ (नागरिक)- राजधानीमा 'फेसन परेड' नामक फेसन सो सम्पन्न भएको छ। शनिबार राति सम्पन्न उक्त फेसन परेडमा मोडल तथा कलाकारहरु र्‍याम्पमा उत्रेका थिए। हेर्नुहोस् विजय गजमेरले खिचेका केही दृश्‍यहरु।
Thursday, 15 September 2011 11:08	नागरिक
काठमाडौं, भदौ २९ (नागरिक)- फिल्म 'कसले चोर्‍यो मेरो मन'बाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड पाएपछि राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा रेखा थापाले भनिन्, 'म मेरा दुई हिरोलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।' फिल्ममा उनको हिरो आर्यन सिग्देल रहेको सबैलाई थाहा थियो।
'तर, दुई हिरोको नाम कसरी आयो?' रेखाले तुरुन्तै कुरा खुलाइन्, 'मेरा हिरोहरु हुन् सबिर श्रेष्ठ र छवि ओझा।' उनले फिल्मसँग सम्बन्धित थुप्रैको नाम लिए पनि आर्यनलाई सम्झिएनन्।